Wekudzora Mutero Mabhuku uye Seminari Anodzidziswa Nehunyanzvi
Makambani Anopindirwa akawana kuti vasere kubva pagumi venhengo dzveruzhinji havasi kutora zvese zvakabviswa pamutemo, zvikwereti, kana kusabvumirwa kwavari kupihwa kodzero neiyo IRS. Naizvozvo, tinopa chirongwa kune vatengi vedu kwatinoshanda takabatana nenyanzvi dzemutero dzepamusoro mumutemo wekambani uye kodhi yemutero kuvabatsira kudzikisa mitero yavo kusvika pamwero mukuru unobvumidzwa nemutemo.
Isu tichakugadza iwe wega mutero chinongedzo, bhizinesi mupi wezano, uye kambani Strategist yekusagadziriswa kusingaperi uye kubvunzana. Chikwata ichi chichava newe kwete panguva yemutero chete, asi munguva yese iwe uri mutengi nesu.
Ongororo yemakore ako maviri apfuura ekudzoka kwemitero ichaitwa kumahofisi aRobert J. Greene, CPA naDennis P. Skea, akashanda makore 28 semumiriri weICS mukuru.
Nekuda kweizvozvo tinobvumidzwa nemutemo kuti tishandure mutero wekare unodzoka kusvika kumakore matatu kana mamiriro ako ezvinhu achida izvi uye tora madhora emutero awabhadhara IRS. Vagadziri vemitero vazhinji vanongoisa manhamba mumabhokisi emafomu emitero, asi isu tinokupa iwe chaiyo nzira dzemitero yekudzikisa mutoro wako wemitero uye chengetedza mari mumaoko ako.
Nekutarisa mumari yako uye nemitemo yemitero tinokwanisa kuona kuti uri kubhadhara zvakakwana huwandu hwemutero. Kana isu tikasakachengetedza iwe $ 3,000 pane ako anodzoka hapana mutengo kwauri.
Nekunyepedzera kwedu kunyora-uye-kuongorora-maitiro ekuongororwa kwakaitwa nechikwata cheaimbove IRS nyanzvi iwe uchagamuchira kuderedzwa kwepamutemo kwega kwega, kukweretwa uye kusunungurwa uye nekuwedzera izvo zvinyorwa zviri pamutemo pasina kukuchidzira kuongororwa kwekudzoka kwako.
Pamusoro pezvo tinopa masevhisi ekugadzirira mutero we80% yevatengi yatinopa basa.
Isu tichakutumira iwe yekuteerera zvinyorwa zvekushandisa kuti ushandise pamwe chete neshumiro.
Iyo tax tax chikamu chinopa vatengi vedu kuchengetedzwa kwekutarisa. Kana iwe ukaudzwa nezvemhando ipi neipi yekuongorora tinomiririra pasina imwe muripo.
Zvekare kana isu tikasakuisira iwe $ 3,000 pane iwe mitero isu tichadzosera mari yedu yebasa, uye isu tichasimbisa izvi kwemwedzi gumi nemaviri.
Mari yedu iri pasi pechikamu chimwe chete chemutero weiyo yakavimbiswa mutero kuchengetedza $ 995 mugore rekutanga. Kana iwe ukatibvumirawo kuita yako bhizinesi tax service isu tinovimbisa $ 5,000 yakasunganidzwa kuchengetedza mumitero nemutengo we $ 1,495. Iwe uchadzidza mitero-yekudzikisa nzira inogona kugara hupenyu hwese.
Kuti unyore muchirongwa chekudzikisa mutero, daidzira mumwe wevapi vekupa mazano ku800-830-1055.
Chii chinonzi self Direct inotungamirwa IRA?